SEKOLIN’NY ZANDARIMARIAM-PIRENENA AMBOSITRA : Olona efatra namoy ny ainy tao anatin’ny iray volana | NewsMada
Tafakatra efatra sahady ireo maty tany amin’ny sekolin’ny zandary tany Ambositra tao anatin’ny iray volana.
Olona efatra izay no namoy ny ainy tany amin’ny sekolin’ny zandarimaria tany Ambositra tamin’ity taona ity. Mbola tanora hanao fanadinana hidirana ho mpianatra zandary fa ny roa kosa efa mpianatra zandary. Tsy nisy niresaka mihitsy, na ny tompon’andraikitry ny zandarimaria aza, mikasika ny antony nahafaty ireo zandary roa lahy farany ireo…
Vao tsy ela akory, ny volana aprily lasa teo, mpifaninina hiditra ho mpianatra zandary roalahy no namoy ny ainy tao anatin’ny andro iray tao amin’ny sekolin’ny zandarimaria tany Ambositra. Ny gazety no namoaka ny vaovao voalohany tamin’izay fotoana izay vao nitondra fanazavana ny teo anivon’ny zandarimariam-pirenena. Vao tsy ela ihany koa, saingy efa tena mpianatra ho zandary roalahy no namoy ny ainy. Araka ny fantatra dia aretim-bavony no nahafaty ny iray ary fianjerana kosa no nahavoa ny iray. Manoloana ireo, tsy misy fanazavana avy eo anivon’ny tompon’andraikitry ny zandarimariam-pirenena.Mikasika ireo mpifaninana hiditra ho mpianatra zandary roalahy, Randriamahazo Ulrich sy Fanomezantsoa Herman, namoy ny ainy ny 14 aprily lasa teo dia nanazava ny teo anivon’ny zandarimariam-pirenena, tamin’ny taratasy fampahafantarana (ndlr: communiqué de presse) fa fijanonan’ny fo no nahafaty azy ireo taorian’ny fihazakazahana 1000 metatra. « Efa nentina teny amin’ny hôpitaly izy ireo vao namoy ny ainy » , hoy ny vaovao nampitain’ny teo anivon’ny zandarimariam-pirenena tamin’izay fotoana izay, roa andro taorian’ny nisehoan’ny tranga tany Ambositra.
Araka ny fantatra, ny faran’ny volana aprily lasa teo no niditra ny mpianatra ho zandary andiany faha-73 teny amin’ny sekolin’ny zandarimariam-pirenena Ambositra. Vao niditra herinandro ny anivon’ny sekolin’ny zandarimariam-pirenena, tovolahy iray no narary vavony tampoka nandritra ny fotoana nanaovanana ny fitsapana ireo mpianatra, ilay antsoina hoe “fitaizana”, ka voatery naiditra hôpitaly. “Nandalo fandidiana mihitsy io tovolahy io tamin’izany saingy tsy tana intsony ny ainy”, hoy ny loharanom-baovao voaray. Ny tapa-bolana lasa teo, tovolahy iray ihany koa no namoy ny ainy nianjera avy eny ambony fandriana. “Voadona mafy teo amin’ny firifany io tovolahy io satria irony fandriana ambony ambany (ndlr: lit superposé) irony no natoriany. Izy no ambony ka mafimafy ny fianjerany tamin’ny tany. Efa nezahina nentina tany amin’ny hôpitaly ihany izy saingy tsy tana intsony ny ainy”, hoy ihany ny fanazavana voaray tamin’ilay loharanom-baovao.
Ny mahavariana ao anatin’ireto tranga ireto, rehefa misy zava-mitranga mivoaka gazety vao mitondra fanazavana ny eo anivon’ny zandarimariam-pirenena. “Tokony mitondra fanazavana hatrany ny zandarimariam-pirenena amin’izay zavatra rehetra mitranga eo anivon’ny sekoly, indrindra fa namoizana ain’olona tahaka izao. Ny tena olana dia tsy mamparisika ny ankizy intsony ny fidirana ho zandary raha izy ireo no mahafantatra ilay vaovao mialohan’ny fanazavana”, hoy ny nambaran’ny manam-boninahitra zandary iray efa misotro ronono, nisafidy ny tsy hitonona anarana. Raha hiverenana ny tranga nisy tamin’ny volana aprily, ny 14 aprily no nitranga ilay fahafatesan’ireo tovolahy roa tany an-toerana, ny gazety no tonga aloha ny ampitson’io ka taorian’izay vao nitondra fanazavana ny teo anivon’ny zandarimariam-pirenena. “Ny zandary no mahafantatra izany tranga izany mialoha ka izy ireo no tokony mitatitra ny zava-misy amin’ny mpanao gazety”, hoy ihany ny fanazavan’ilay manam-boninahita.
Mbola hisy fanazavana?
Amin’ireto tranga roa farany ireto, izay tsiahivina fa efa herinandro telo izany no nahafaty ny iray ary tapa-bolana ny iray, dia mbola tsy nitondra fanazavana mihitsy ny teo anivon’ny zandarimariam-pirenena. Tsy fantatra mazava intsony izay tena zava-misy marina ao amin’ity sekoly ity. “Vao mitranga ny toy izao dia tsy maintsy manao tatitra amin’ireo olona amboniny ny lehiben’ny sekoly. Raha hazavaina izany dia hoe, fantatry ny tompon’andraikitry ny zandarimariam-pirenena ny fisian’io tranga io saingy izy ireo mihitsy no minia tsy mitondra fanazavana”, hoy kosa ny nambaran’ny loharanom-baovao iray. Na dia efa herinandro maromaro aza izay no lasa, andrasana hatrany ny fanazavana entin’ny eo anivon’ny zandarimariam-pirenena mikasika ny antony nahafaty marina ireto tovolahy roa ireto. Raha hiverenana mantsy, olona efatra izay no namoy ny ainy tao amin’ity sekolin’ny zandarimariam-pirenena Ambositra ity.